sosegado : မိုက်ကယ်ဘအေး နှင့် သူ၏ ပါရာနော်မယ် အထူးအဆန်းများ ၃
Posted by sosegado at 1/19/2012 10:30:00 PM
မျှော်လိုက်ရတာ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်သိမ်းက အလောတကြီး သိမ်းသွားသလိုဘဲ
မိုက်ကယ်ဂျစ်တူး လို့ လေ-ဟားဟားဟား
Thank you Ko Sose...
May everybody enjoy their freedom.
၁ ကနေ ပြန်ပြန် ဖတ်ရတာ တောင်အားမရသလိုပဲ။ အစ်မ ရွှေစင်ပြောသလို ဇာတ်သိမ်းမြန်လိုက်တာ..။
ဖရီးသင့်ကာ ဆိုတာ ဘာလဲ
မိုက်တယ်။ တချိန်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူဝင်စားမြေး အဖိုး နှစ်ယောက်စလုံးက အတိတ်ကြွေးကို ပေးဆပ်လိုက်တဲ့ စိတ်နယ်လွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကလေးပါပဲ။
ဒီလို ခပ်ဆန်းဆန်း ဇာတ်အိမ်မျိုးတွေ သဘောကျတယ်။
စောင့် ဖတ်ရကျိုးနပ်တဲ့ ဇတ်လမ်းလေး တစ်ခုပါပဲ. မိုက်ကယ်ဘအေးနေရာမှနေ စာရေးသူ ပေးချင်သော မက်ဆေ့ လေးများကလည်း အဖိုးတန်ပါ၏ ။ "စစ်မှန်သော သစ္စာတရားတော်များရှိပါလျှက်နဲ့ လက်တွေ့အသုံးမချတတ်သောလူမျိုးကို ရွှေမြန်မာလူမျိုးဟုခေါ်သည်ဟု မိုက်ကယ်ဘအေး မှတ်ချက်ချမိသည်။ " ဆိုသော စာသားလေးကို နှစ်သက်မိတယ် ။ မြန်မာဘုရင် သေပြီ ဆိုသော နားလည်မှုလွဲချော်ကြတဲ့ အကြောင်း တွင် အသံထွက် ၍ပင် ရယ်မိပါသည်။ ဘိုထိန်@nayonmoe
အပိုင်း ၁ က စပြီး ပြန်ဖတ်လိုက်တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ အပြည့်ပဲ။ ချဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် ၀တ္ထုရှည် တအုပ်စာလောက် ရနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုဆိုဆီ ထုံးစံအတိုင်း အနှစ်ချုပ် ရေးထားသလိုပေါ့။ အဘိုးကြီး စတီဗင်တို့ မိသားစုကိုပဲ သနားမိတယ်။
ဟင် မိုက်ကယ်ဘအေးက သတိလစ်သွားတာလား သေသွားတာလားဟင် .
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းလို အရေးအသားနဲ့ ကိုဆိုဆီလိုင်းပြောင်းရေးလိုက်တာ အပိုင်း(၃)မှာပဲ အဆုံးသတ်သွားတာပေါ့။ ဇာတ်သိမ်းခန်းက ဆွဲဆောင်မှု အကောင်းဆုံးပဲ။ အမှန်က ဆက်မယ်ဆို ရသေးတယ်နော်။ ကိုဆိုစီ့ကို မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီလို လိုင်းမျိုးနဲ့ ပိုနှစ်သက်မိပါကြောင်း။
why so fast to end? i also think mostly Buddhist don't know what is Buddhism.look forward yr new novel. thanks.
အစကနေ တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်တယ်၊ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးက အတော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်၊ ဒီလိုမျိုး စိတ်နယ်လွန် ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေကို ပြင်ပက တကယ့်နေရာတွေ၊ မြေပုံတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့ထားတာမျိုး ကြိုက်တယ်ဗျ..၊2Thumbs up..!!
It's very interesting!I have been to places I had dream before. It's weird feeling.Sometime it scared me, I told myself it's just coincidence.
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ အစ်ကိုရေ... ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ဇာတ်သိမ်းခန်းက ရုတ်တရက်ကြီး ပြီးသွားတော့ မြန်လိုက်တာလို့ တွေးလိုက်မိတယ်... ဒီလို ဇာတ်အိမ်လေးတွေက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်...
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ ကိုဆိုဆီ ပြောချင်တာတွေကို အပြည့်အ၀ထည့်ရေးသွားတာပဲ...ကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့ စကားကို ကိုယ်စားပြောသလိုပါပဲလားလို့ တွေးပြီး ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်...
ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ ဘုန်းကြီးရယ် ရဟန်းရယ် သံဃာရယ် ဆိုပြီး သုံးမျိုးကွဲနေတာကိုး...
မိုက်ကယ်ဘအေး နောက်ဆုံးပိုင်းကို ဖတ်ရတာ အားမရဘူးဗျာ...ရေးလို့ ရလျှက်သားနဲ့ ချိုထားလိုက်သလို ခံစားရတယ်...
နောက်ထပ်လည်း အခုလို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေ စောင့်မျှော်လျှက်ပါဗျား...
ဒီလို ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ရေးဖို့က တကယ် မလွယ်ပါဘူး။ အသေးစိတ် စိန်ပြေနပြေ ရေးလိုက်ရင် တော်တော် ကောင်းမှာပဲ။